အိပ်မက်အိမ်: မွေးမြူထားတဲ့နေ့ ရက်တွေ
မွေးမြူထားတဲ့နေ့ ရက်တွေ
ဘ၀မှာ နင်မသိတာတွေ အများကြီးပါလို့ငါ ပြောခဲ့ တဲ့အချိန်တုန်းက ငါကိုယ်တိုင် သိပ်ကိုလေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာ ဗဟုသုတတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ခဲ့ တာလေ ။ ခုတော့ဘ၀မှာ ငါမသိသေးတာတွေလဲ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်ဟာ ။
လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားလေ ၊ လေးလေး ပင်ပင် ဖြစ်လေပါပဲ ။ ခုတော့ငါ ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါး လေးတွေပဲ သဘောကျ လာခဲ့ တယ် ။ ဟမ်ဘာကာ ကို ငါစားတတ်လာသလို ၊ တီဗွီ ကြော်ငြာလေးတွေလဲ ငါကြည့်တတ် လာတယ်။
နောက်ပြီး ဒဿနဆန်ဆန် အတွေးအခေါ် စာအုပ်ထူထူကြီးတွေကို ငါမဖတ်ဖြစ်တော့ ဘဲ ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါး မဂ္ဂဇင်း ထဲက ကဗျာနဲ့ဝတ္တုတိုလေးတွေဘဲ ငါ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ တယ် ။ နဂိုက လေးပင်နေတဲ့ဘ၀ထဲမှာ သိပ်ကိုဇာတ်နာတဲ့ဗီဒွီယို ဇာတ်ကားတွေ ၊ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွေ ငါ မကြည့်ချင်တော့ ဘူး ။ ဂျူလီယာ ရောဘတ်ရဲ့Nothing Hill လို ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားမျိုးလေးတွေ ကြည့်တတ်လာခဲ့ တယ် ။
နင်လဲကြားဖူးမှာပါ ကောင်မလေးရယ် . . . ဘ၀ ဆိုတာ တိုတိုလေးရယ်တဲ့၊ အဲဒီတိုတောင်းတဲ့ဘ၀ အချိန်လေး ထဲမှာ လေးလေးပင်ပင်တွေ ငါ မစဉ်းစားခြင်တော့ ဘူး ။
ဒါပေမယ့်ကောင်မလေးရေ . . . လူတွေအများပြောနေကြတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ကမ္ဘာ့ ရွာကြီး ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီး မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အတင်းကာရော တူအောင်လုပ်သူတွေလို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လိုက်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် ။
ငါ အခုတွေးမိတာက လူတွေဟာ ပေါ့ ပေါ့ ပါးပါး လေးတွေကို သူတို့ သဘောနဲ့နှစ်သက်လာကြတာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် လေးလေးပင်ပင်တွေကို မနိုင်ကြတော့ လား ဆိုတာပါဘဲ ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါဒီလို တွေးမိတာကိုက လေးလေးပင်ပင် ဖြစ်နေပြန်ပြီနော် ။
အခြေအနေ နဲ့အချိန်အခါကဘဲ လေးလံမှုတွေကို မသုံးစွဲလိုတော့ တဲ့ အတွက် အလိုအလျှောက် ပြောင်းလဲ လာခဲ့ တာလို့ ဘဲ ငါထင်လိုက်မယ်ဟာ ။
ကောင်မလေးရေ . . . ကောင်းကင်ကြီးဟာ အပြာရောင်လို့ပြောကြပေမယ့်တခါတရံ မှာ အမဲရောင် ၊ တခါတရံ မှာ အဖြူရောင် ဖြစ်နေတတ်တာကို နင်သိလား ။ အဲဒါ ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ပါဘူးဟာ . . . ဥတုရာသီတွေ က ကောင်းကင်ကြီးကို အရောင်ချယ်ပေးကြတာပါ ။
စကော့ တလန်ကို ငါ မရောက်ဘူးပေမယ့်ကော်လန်ဘလူး ဆိုတဲ့ဘရန်ဒီ ငါသောက်ဖူးတယ် သိလား ။
ဒီနေ့နံက်အစောကြီး နင့် ကို အရမ်းသတိရလို့ဇော်ဝင်းထွဋ္ဋ် ရဲ့အ၀ါရောင်လမ်းကလေး သီချင်း ငါနားထောင် မိတယ်ဟာ ။
ရည်ရွယ်ချက်တွေ x x x အပြည့်နဲ့x x x ထူထောင်ရန် x x x ဘ၀ခရီး x x x အချိန်တွေကို ရင်ဆိုင်ကာ x x x ကိုယ်သွားတော့ မယ် x x x အ၀ါရောင် x x x သူငယ်ချင်း + + +
ကိုယ်ဟာ နှုတ်ခွန်းဆက် x x x အဝေးကို x x x ခင်တွယ်နေပေမယ့် လဲ x x x ဘ၀အတွက် x x x သွားရမှာဘဲ x x x အသဲထဲက နှုတ်ဆက်တယ် x x x လမ်းကလေး x x x တနေ့ တော့ပြန်ဆုံမယ် x x x အ၀ါရောင်လမ်း ကလေး + + +
ကောင်မလေးရေ . . . တစ်ခါတစ်ခါ ဖိနှိပ်မရတဲ့ငါ့ ခံစားမှုတွေက တချိန်က အဟောင်းတွေကို အသစ်ဖြစ်ပြီး သတိရစေရဲ့။ ဟောင်းလောင်းပေါက် ငါ့ ရင်ခွင်ကနေ တဖက်ကို နင်မျှော်ကြည့်မိရင် ငိုမဲ့ မဲ့တောင်တန်းကြီး နဲ့အောင်ပင်လယ် ကန်ရိုးက လယ်ကွင်းတွေကို နင်မြင်ရမှာပါ ။
ရေနီမြောင်းဘေးက အကြော်ဆိုင်မှာ ချစ်သူစုံတွဲတွေ ထိုင်နေကြတုန်းဘဲလား ။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမှာ မထိုင်ကြတော့ ဘဲ ဘီဘာလီ ဟီးလ် မှာဘဲ သွားထိုင်နေကြသလား ။ တက်မက်မှု အပြည့်နဲ့ခွဲခွါခြင်းမှာ လွမ်းဆွတ်မှု တွေသာ ဝေစားခဲ့ ရတယ် ကောင်မလေးရယ် ။
ခံစားမှုဆိုတာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထုပ်ပိုးမထားသင့် ဘူးလို့အသက်သုံးဆယ်ကျော်မှ သိခဲ့ ရတယ်ဟာ ။ တခါတုန်းကတော့ " ယောနသံ ဇင်ယော် " ဆိုတဲ့မိန်းကလေးအဆောင်ရှေ့ မှာ ကိုင်ဇာ ရဲ့" အလွမ်း " ဆိုတဲ့သီချင်းကိုဘဲ ညလုံးပေါက်ဂစ်တာတီးရင်း ဆိုခဲ့ ကြတာ ။ " ငါတို့ဘာကြောင့် ကွဲသွားကြတာလဲ " ဆိုတဲ့စာသားလေးကို ဆိုရတာကိုက အဲဒီအချိန်တုန်းက ခံစားမှုတမျိုးပေါ့ ဟာ ။
အချိန်နာရီ တွေဟာ ငါ့ ကို ဇွတ်အတင်း တွန်ထုတ်နေကြတယ် ။ ကောင်မလေးရယ် . . . ။
အကယ်၍ နင်နဲ့ သာအတူတူဆိုရင် ဧရာဝတီမြစ်ထဲက ၀ါးဖေါင်တွေနဲ့ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာကြီးထဲက ဖီဂျီ ကျွန်းစုတွေ အထိ ငါသွားရဲပါရဲ့။
မျှော်လင့် မှုဆိုတာ ရှင်သန်ခြင်းတွေကို မေ့ ပျောက်စေတယ် ။ ဘ၀ အမောတွေ ဆိုတာကလည်း ပန်းတိုင် မရောက်ခင် အန်မထွက်မိအောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့ ဟာ ။ ဒါပေမယ့်အပြောလွယ်ပြီး အလုပ်ခက်တာက မတူညီတာကို တူညီအောင်လုပ်ရတာရယ် ၊ မဖြစ်သေးတာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ယူ ရတာရယ် ၊ မရောက်သေးတာကို ရောက်အောင် သွားရတာတွေပေါ့ ဟာ ။
တခါတလေ ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂါတ်ကို ငါတစ်ယေက်ထဲ စိတ်ကူးနဲ့အရောင်တွေချယ်နေမိတာ . . . အရမ်းပျော်စရာကောင်းတာပဲ ။ အဲဒီလို နေရတာကိုလည်း ငါပျော်တယ် ။
ကမ္ဘာကြီးကို ကမ္ဘာကြီးလို ငါ မြင်မကြည့်ချင်ဘူးဟာ . . .
ငါ့ မျက်လုံးထဲမှာတော့ကမ္ဘာကြီးဆိုတာ ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲက ဘီရိုပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာလုံးလေးလို့ဘဲ ငါမြင်တယ် ။ သိပ်ကိုကျယ်ပြောတဲ့လောကကြီးထဲမှာ အနုတ် လက္ခဏာတွေနဲ့ လဲ ၀င်မတိုက်ချင်တော့ ဘူး . . .။
အရာရာကို အပေါင်းလက္ခဏာတွေနဲ့ ဘဲ ငါကြည့်ဖို့ကြိုးစားတယ် ။ အသက်အရွယ်နဲ့အတူ အသိဥာဏ်တွေလဲ သယ်လာသင့် တယ်လေ ။
ဒီနေ့ တော့တောင်တန်းတွေရဲ့နှလုံးခုန်သံတွေနဲ့ အတူ ငါ အိပ်စက်တတ်ခဲ့ ပြီ ။
နှိပ်စက်ခြင်းရဲ့အလင်းရောင် ၊ အလွမ်းငွေ့ ငွေ့ မှိန်မှိန်ကလေးထဲက ၊ အိမ်မက်တွေ ပေးခဲ့ ဘူးတဲ့ကောင်မလေးရေ . . .
ငါဆိုတဲ့နေရာမှာ ငါရှိနေဘို့ နဲ့နင်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နင်ရှိနေဘို့အတွက် ၊ ငါကတော့အာရှတိုက်ရဲ့တစ်နေရာမှာ မွေးမြူထားတဲ့နေ့ ရက်တွေနဲ့ အတူ ဘ၀ ကို ကောက်ယူနေဆဲပေါ့ ဟာ . . . ။
Labels: ၀တ္ထုတို, ရသ
I miss M.D.Y so...
Anyways thanks for your story.
ကျေးဖူးပဲ ဦးငယ်ရေ . . . မန္တလေးရောက်မှ ကောင်မလေးကို ပြောပေးပါ့ မယ် ။